Mee igwe eji eme egwuregwu nke aka gi nke oma site na 3D ebi akwụkwọ | Akụrụngwa n'efu
Ọ bụrụ na ị nostalgic maka oge ahụ mgbe, dị ka ụmụ na ọ bụghị otú na-eto eto, anyị nwere ike inwe ọnụ na ndị enyi anyị na ndị arcades jupụtara Arcade video egwuregwu igwe, nke, ikekwe ọ bụghị na ndị dị otú ahụ n'ụba na di iche iche, i nwere ike ịhụ na ụdị nile nke Ogwe, ụlọ mmanya na ebe ọha, enwere ike ugbu a bụ oge iji mee nke gị Arcade ọ bụ ezie na nke a nke ukwuu mfe ibufe.
Ekele diri Christopher Tan, a hụrụ n'anya nke a ụdị Arcade consoles na ha nnukwu ngwá ụlọ, njikwa, levers na cores, taa ị nwere ohere iji nweta atụmatụ na-ewu, dị ka ị pụrụ ịhụ na ihe oyiyi dị na elu nke a otu post, nke gị Nweta nkasi obi na nke a iji laghachi na ịnụ ụtọ aha ndị a ma ama dịka Super Pang, Pacman, Arkanoid na ọbụna Space invaders.
Christopher Tan na-egosi anyị otu esi emepụta igwe eji arụ ọrụ na-adọrọ mmasị na nke pụrụ iche site na mbipụta 3D.
Iji nweta igwe Arcade a, nwa okorobịa Christopher Tan kpebiri iji Nkọwa 3D maka imepụta ya. Dịka nkọwa zuru ezu, gwa gị na iji rụọ ọrụ a dị egwu, ọ ga-etinye ihe karịrị 100 awa na ọrụ mbipụta akụkụ atọ, ule, mgbanwe nke mpempe niile ma ọ bụ ntinye nke Raspberry Pi nke e jiri mee ihe maka ntọala ahụ. nke LCD ihuenyo nke ị ga-elele egwuregwu gị ma ọ bụ dịka onye njikwa ahụigodo.
Dika nwatakiri nwoke na-ahu maka mmepe oru ngo a na-akuko, o doro anya na echiche nke imepụta igwe Arcade bilitere mgbe ejiri ngwa ngwa mbipụta 3D dị mfe ma dịkwa nkọ wee mee ya. Anyị na-ekwu maka obere onye nbipute 3D nwere isi nke nyere ya ohere, imirikiti, imepụta iberibe nwere oke nha nke 22 x 22, nke mere ka o jiri igwe ya mepụta igwe ya. ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke obere akụkụ.
Ọbụlagodi, dịka ị si hụ na vidiyo ahụ, nsonaazụ ya bụ ihe ịtụnanya ebe ọ bụ na o jisiri ike mepụta ihe eji arụ ọrụ 8 anụ ọhịa ahụ Site na mkpebi 1024 x 768 nke etubere ya na vinyl. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmepụta Arcade igwe gị, gwa onwe gị na ị nwere usoro niile ụbọchị ọmụmụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Mee igwe igwe ihe eji eme ihe nke aka gi site na ntinye 3D
Aga m anwa ibipụta ntakịrị ihe na ọdụm 2, nke bụ otu egwuregwu dị ebube
Onwe m, achọpụtara m na igbe ahụ dị mfe ịme na DM, OSB, chipboard, ... You na-echekwa ọtụtụ ọrụ ebe ọ bụ ime ka ịkpụ na aja ya. Ma dị ka echiche ọ dịghị njọ ime ya na ngwa nbipute 3D.
Maka nke a, ị ga-enwerịrị ihe ọmụma dị mkpa banyere elektrọnik opekata mpe?
Zaghachi Dairo Joel